Endrik'io pejy io tamin'ny 27 Mey 2018 à 11:49
281 octets ajoutés , il y a 2 ans
Nao fanatsarana vitsy
Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Aprily 2018 à 12:52 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 27 Mey 2018 à 11:49 (hanova) (esory)
k (Nao fanatsarana vitsy)
Ny fanekem-pinianapinoana dia fanambaràna ny finoana ampahibemaso. Ny [[Jodaisma|Jiosy]] sy ny [[Kristianisma|Fiangonana kristiana]] sasany (katolika sy ortodoksa ary protestanta sasany) ary ny [[Silamo]] dia manana fanekam-pinoana.
==== Ny voasoratra ao amin'ny ''Devarim'' sy ny Deoteronomia ====
AoNy aminfanekem-pinoan'ny Jodaisma, ao amin'ny ny fanekam-pinoana dia ny hoe שמע ישראל / S''hemaʿ YisrâhemaʿYisrâ'êl'' ("mihainoaMihainoa ry Isiraely"). Izao no voasoratra ao amin'ny ''Devarim'' ao amin'ny [[Torah]]:
שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָֽד׃‬ / ''Shemaʿ Yisrâ'êl YHWH elokhenu YHWH ekhâd'' ("Mihainoa ry Isiraely, i [[Yahweh]] no Andriamanitsika'','' Tokana i Yahweh").
Hita ao amin'ny [[Bokin'ny Deoteronomia|Deoteronomia]] (Deo. 6.4) ao ao amin'ny [[Baiboly]] io andala-tsoratra io:
==== Ny tsy fanononana ny anaran'Andriamanitra ====
Araka ny fanao jiosy dia tsy tononina fa soloana iony anarana hoe יְהוָה '''/''' YHWH io rehefa tononina ilay fanekam-pinoana, ka mety ny hoe ''HaShem'' ("Ny Anarana") na ny hoe אֲדֹנָי / ''Adonai'' ("Tompo") izany na zavatrateny hafa nano asolo an'io anarana io. Izany dia tsy midika ho tsy soratana.
''Shema Yisrâ'êl Adonai Elokhenu, Adonai Ekhâd'' ("Mihainoa ry Isiraely, ny Tompo no Andriamanitsika, Tokana ny Tompo").
Marihina fa ao amin'ny Baiboly jiosy amin'ny fiteny grika atao hoe [[Septoaginta]] dia nosoloana ny hoe ''Kyrios'' ("Tompo") ny anaran'Andriamanitra.
==== Fampiasana ny fanekem-pinoana jiosy ====
Ny fiangonana kristiana dia nanana fanekam-pinoana izay mamaritra ny maha kristiana na tsiaKristiana ny olona iray. Ho an'ny Kristiana, ny fanekem-pinoana voalohany dia ny [[kerigma]], fanambaram-pinoan'ny Kristiana voalohany.
<small>Mino an’Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho; ary mino an’i Jesosy Kristy, Zanaka lahy Tokana Tompontsika. Izay notorontoronina tamin’ny Fanahy Masina, naterak’i Maria Virijiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ny hazofijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin’ny fiainan-tsi-hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan’Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hihaviany [[Fitsarana farany|hitsara ny velona sy ny maty]]. Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty ary ny [[fiainana mandrakizay]]. Amena.</small>
Marihina fa tsy ny fiangonana kristiana rehetra no manana fanekem-pinoana.
* [[NyHataky Hataka nampianarin'ny Tompo]]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/815642"